ọla ọla | induction igwe ihe eji eme oku | ihe ndozi oku
Ngwunye Mgbakwunye Brass Egwuregwu Brass
Nkume Ntughari Akpụkpọ ụkwụ Brass Egwuregwu Na-ekpo ọkụ nke Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ebumnuche Iji mee ka akpụkpọ ụkwụ na-eme ka usoro ọla kọpa rụọ
Ngwongwo Preassembled okpomọkụ Exchanger na ọla kọpa akpa na 2 ọla ọgwụgwụ okpu 2.36 "(60mm) OD, 0.08" ka 0.12 "(2 ka 3mm) oké na ma nsọtụ, mmiri mmiri solder
Okpomọkụ 302ºF (150ºC)
237kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa • DW-UHF-20kW sistemụ kpo oku, kwadebere ya na isi ọrụ ya dịpụrụ adịpụ nwere otu ihe 1.0μF
Usoro A na-eji eriri okpukpu anọ nke pancake iji gbanye okpu ọla abụọ n'otu okirikiri. Liquid solder na-squirted na njedebe okpu ma na-ekpo ọkụ maka 2 sekọnd na 18ºF (302ºC) iji gbaa ọkụ ọkụ. Mgbe ahụ
a mụbaa okpomọkụ na 482ºF (250ºC) maka 15 sekọnd iji ree akụkụ ahụ.
Igwe kpo oku na-enye:
• E jiri ya tụnyere efere ọkụ, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-enwe ike ikpo ọkụ n'akụkụ abụọ na 30 sekọnd vs. otu akụkụ na 60 sekọnd
• Nbawanye mmepụta
• Ọ dịghị nchọpụta na usoro nhazi ngwa ngwa
Categories Technologies Tags onye na-ekpo ọkụ ọkụ, akwa ugboro na-eme ka ọla kọpa sie ike, mgbakwunye ọla kọpa, RF na-agbanye ọla, mgbakwunye ọla, onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ
Ngwunye nke Brass Tube-Pipe
Ntughari na-emepụta tuberculosis na tuberculosis nke RF na-eme ka a na-agba ume
Ebumnuche: dermegharị akpa ọla ọla abụọ na-atụle 3/4 ″ na 1/4 ″ ọnụ maka iji dị ka antennas ekwentị. Ogologo tubes dị site na ụkwụ anọ (4) ruo ụkwụ iri na abụọ (12), a ga-erekwa ya n'akụkụ akụkụ axial. A ga - eji nkwonkwo 60/40 Tin Lead Solder na Kestor Rosin tapawa nkwonkwo ahụ.
Ihe: Brass Tubes enweghị 3/4 ″ na 1/4 ″ 60/40 Tin Lead Solder
Ngwa: Site na ojiji nke DW-UHF-40KW na-ewepụta ike nrụpụta nke ike ya na ụzọ ise pụrụ iche (5) tụgharịrị 12 ″ ogologo ọwa, e rụpụtara nsonaazụ ndị a:
3750 F ruru na solder na-aga mgbe oge kpo oku nke 35 sekọnd.
Emepụtara mmepụta nke 24 ″ kwa nkeji iji zuru oke.
A na-ahụ ihe na-eme ka a na-edozi ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ ma dị jụụ
Akụrụngwa: DW-UHF-40kW na-ewepụta ezigbo ike itinye ọkụ na-arụ ọrụ gụnyere otu (1) ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nke nwere ihe abụọ (2), yana ihe ntanetị pụrụ iche (5) nke sitere na 3/16, tubing tubing na tụọ 1 1 / 4 ″ site 12 ″.
Categories Technologies Tags mgbatị ukwu dị elu, mgbakwunye ọla kọpa, ihe nkedo nke na-eme ka a na-agbanye ume, RF na-agbanye ọla, RF na-eme ka akpụkpọ ụkwụ sie ike, mgbakwunye ọla, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, na-etinye ígwè tube
Ntughari nke Brass Assembly
Mbube nke Brass Assembly na-agba ume na Units Soldering Units
Ebumnuche: Iji kpoo ọkụ ọla na njedebe okpu na 4500F maka ịgbanwere n'ime 20 sekọnd. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ihe eji emepụta ihe na-emepụta ihe njikọta n'etiti isi na okpu. The ahịa na-arịọ a àgwà solder nkwonkwo na di ntakiri kpo oku nke bellows iji gbochie annealing na arụmọrụ weere. A ga-eji ihe eji edozi Solder, n'ụdị efere akwa, iji mezue ngwa a.
Ihe: Brass Bellows na-atụle 2 ″ na dayameta Solder Preform
Flux Free Free Cadmium
Ngwa: DW-UHF-20kW na-ewepụta ike ọrụ ike na-arụ ọrụ yana ụzọ pụrụ iche atọ (3) tụgharịrị ọnya okpukpu abụọ iji nweta nsonaazụ ndị a:
E weere 4500F ma mee ka mmiri na-agba ọsọ na 6.3 sekọnd.
A hụrụ nkwonkwo a na-ahụ maka nkwonkwo.
Akụrụngwa: DW-UHF-20kW na-ewepụta ezigbo ike itinye ọkụ n'ime ike ọkụ gụnyere otu (1) ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nke nwere otu (1) 1.2 μF capacitor, na atọ (3) pụrụ iche na-atụgharị ọnya okpukpu abụọ nwere ọnya dị n'ime 0.4 ″.
Categories Technologies Tags mgbatị ukwu dị elu, mgbakwunye ọla kọpa, Egwuregwu Brass Egwuregwu Induction Soldering, RF Ntughari Mgbakwunye Brass, mgbakwunye ọla
Ntughari na-emechi ọla edo
Nkwụnye aka nkwụnye mgbanaka ígwè na-agba agba agba agba IGBT
Ebumnuche: Iji kpoo 1 3/4 ″, 3 ″ na 6 ″ dayameta ọla nchara na mgbaaka ọla kọpa a kpụrụ akpụ na 3600 F maka ire ere n'ime atọ (3) na isii (6) sekọnd. Ugbu mmepụta na-emezu site na iji a soldering ígwè na mkpisi nri rosin cored solder. Usoro a na-ahapụ ire ere na-achọghị n'akụkụ akụkụ nke ihe na-amị amị ebe ebe mgbanaka na-akpọtụrụ. Onye ahịa ahụ ga-achọ ịhụ mmụba na mma nkwonkwo na-enweghị igbu oge.
Ihe: 303 Brass Slip Rings of 1 3/4 ″, 3 ″ and 6 ″ diameters. Sheathed Ọla kọpa Waya Assembly.
Ngwa: Site na ule nyocha ụlọ nyocha, DW-UHF-20kW na-ewepụta ezigbo ike itinye n'ọkwa ike yana ụzọ pụrụ iche anọ (4) tụgharịrị "ntị muff" ụdị eriri igwe mepụtara nsonaazụ ndị a:
Oge edere 3750 F dị ka edepụtara n'okpuru ebe a:
- 1 3/4 ″ na sekọnd 3
- 3 ″ na sekọnd 3-4
- 6 ″ na 5 sekọnd
A hụrụ ọhụụ na-eme ka mmiri na-eme ka ọ ghara ịdị ọcha.
A na-atụ aro nrụpụta nsogbu na-eme ka mmepụta ngwa ngwa.
Ejikọtara akụkụ dị iche iche site na ụzọ anọ pụrụ iche (4) na-agbanye "ntị muff".
Akụrụngwa: DW-UHF-20kW na-ewepụta ike itinye ọkụ na-arụ ọrụ siri ike gụnyere otu (1) ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nwere otu (1) 1.0 μFcapacitor, ntinye 4-20mA maka nkedo nkedo ngwa ngwa, na anọ (4) pụrụ iche "ntigbu ntị ”Ụdị eriri igwe.
Categories Technologies Tags mgbatị ukwu dị elu, mgbakwunye ọla kọpa, RF na-agbanye ọla, mgbakwunye ọla, na-eme ka onye na-ekpocha cha cha, akwa mgbanaka ọla